September 2015 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Anonymous at 11:17:00 PM 0
Anonymous at 11:11:00 PM 0
ယင်းကဲ့သို့ အလားတူပဲ အခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ အမျိုးသားရဲ့  Facebook မှ တစ်ဆင့် အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ချစ်ခင်စုံမက်မှုကြောင့် အိမ်ထောင်ကွဲ တဲ့ ဖြစ်ရပ်လည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယင်းဖြစ်ရပ်မှာတော့ အမျိုးသမီးက နစ်နာပြီး သားသမီးနဲ့ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ Facebook, G Talk တို့ကြောင့် ကွဲ သွားရတဲ့ အိမ်ထောင်တွေ အများကြီးပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာပြည် မှာ ဖြစ်နေ တာတင် မဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာမှာပါ အရေအတွက် အလုံးလိုက် အရင်းလိုက်ကို ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ ကျတော့လည်း အပြောင်းပြန် ပါ။ Facebook ကနေပဲ ဖူးစာရှာတွေ့ပြီး ချစ်ကြီုက် ထိမ်းမြားလက်ထက် သွားသူများလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ၂၁ ရာစုမှာ Facebook , Twitter အသုံးပြုမှုဟာ အိမ်ထောင်ရှင် အကြားမှာ အိမ်ထောင်ကွဲ စေရန် အကြောင်းပြချက် တစ်ခုပါ ဖြစ်လာကြောင်း သိရပါတယ်။
အောင်ခမ်း (ရိုးရာလေး) - See more at: http://www.achitabout.ga/#sthash.ILT6T3oh.dpuf
Anonymous at 11:10:00 PM 0
Anonymous at 11:34:00 PM 0
ဒီနေ့သားကြီးကျောငိးကြိုရင်းအပြန်မှာ ဖေဖေ coca cola တစ်ဘူး ပူရှိန်းတစ်တောင့်ဝယ်ပေးပါတဲ့ မင်းဘာလုပ်ဘို့လဲဆိုတော့ သားမသောင်ပါဘူးတဲ့
ဒီနေ့ကျောင်းမှာ သိပ္ပံချိန်လက်တွေ့သင်တန်းမှာ ဆရာက coca cola ခွက်ထဲ ပူရှိန်းကိုထဲ့ပြတယ် ဖောက်ဆိုပေါက်ထွက်သွားတယ်တဲ့ အဲ့ဒါအိမ်မှာစမ်းလုက်ပြမလို့တဲ့
ကျွန်တော်လဲ သားမလုပ်ရဘူး သေတတ်တယ် ရောစားလို့လဲမရဘူးလို့ဟြေခဲ့တယ်
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တုန်းကလဲ သတင်းတစ်ပုတ်ဖတ်ဖူးတယ် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံကကျောင်းသားလေးတစ်ယောက် ကိုလာနဲ့ပူရှိန်းတွဲစားမိတာ ပါးစက်ကသွေးတွေအန်ထွက်လာပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်တဲ့
မိဘတွေအနေနဲ့လဲသတိထားသင့်ပါတယ် ကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေ အလွယ်တစ်ကူရနိုင်ပြီး ခလေးတွေကလဲ ကိုလာတို့ပူရှိန်းတို့ဆိုသူတို့အကြိုက်ပါပဲ
နောက်ထက်တစ်ခုကြားမိတာကမသေချာပေမဲ့ coca cola နဲ့ဒူရင်းသီးလဲ မတည့်ဘူးလို့ဆိုကြတယ်
Huawei Phone များတွင် Google Service ထည့်ပြီး Google Play သုံးလို့မရတဲ့ Error ရှင်းနည်း။
Anonymous at 11:05:00 PM 0
Huawei Phone များကို Google service ထည့်သုံးပြီး နောက်ပိုင်း Play Store သုံးလို့ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး
စိတ်ညစ်နေသူများ အတွက် ပြန်လည်ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေး ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ပြန်လည်ဖြေရှင်း ဖို့ အတွက်တော့ Root လုပ်ထားဖို့နဲ့ Root Explore apk လေးတော့ လိုအပ်ပါမယ်။
ဒေါင်းပြီးပြီဆိုရင် Root Explore ကို install လုပ်လိုက်ပါ။
root explore ကိုဖွင့်ပါ search box ကနေ host ကို Search ကနေရှာလိုက်ပါ။
/etc/host/ ကို ကြာကြာဖိ open with > Text Editor ကို နှိပ်ပြီး
ပြီးရင် ပြန်ဝင်လိုက် ရပါပြီ။
အပေါ်မှာပြောထားသလိုလုပ်လို့ မှ မရဘူးဆိုရင်တော့ host ကို ဖျက်ပေးလိုက်ပါ။
Credit : == MPX Team == ‪#‎နည်းပညာအဖွဲ့‬
ref:‎Myanmar Mobile FAQ
International Slangs (နိုင်ငံတကာအတိုသုံးဗန်းစာလုံးများ)
Anonymous at 11:50:00 PM 0
143 >> I Love You
1daful >> Wonderful
2 >> Too
2L8 >> Too late
2EZ >> Too Easy
53X >> Sex
555 >> Hahaha
900913 >> Google
10Q >> Thank You
10X >> Thanks
?up >> What`s up?
<3>> Love
AFC >> Away From Computer
a/s/l >> Age/Sex/Location
Abt >> About
ASAP >> As Soon As Possible
Bae >> Babe, Baby or Significant other
BTW >> By The Way
Burma >> Be Undressed Ready My Angle
BZ >> Busy
C'mon >> Come On
Cing >> Seeing
CML >> Call me later
CMT >> Comment
Coz >> Because
CPY >> Copy
CTRL >> Control
CUL >> See you later
Cya >> See you (Goodbye)
D8 >> Date
Da >> The
DM >> Direct Message
DMAF >> Do meafavor
DND >> Do Not Disturb
e.g >> Example
EMM >> E.mail me
Epic >> Very impressive
Ezi >> Easy
F8 >> Fate
F9 >> Fine
FAM >> Family
FB >> Facebook
Getcha >> Get you
GJ >> Good Job
GL >> Good Luck
GM >> Good Morning
GN >> Good Night
Gona >> Gonna >> Going to
Gotta >> Go to
G&8 >> Great
H8 >> Hate
Hak >> Here'sakiss
HD >> High-Definition
Homey >> Friend
Hubby >> Husband
Hun >> Honey
Hv >> Have
HRU >> How are you?
I<3U >> I Love You
IC >> I see
IDK >> I don't know
Info >> Information
J4U >> Just for you
Jas >> Justasecond
Jus >> Just
K >> Ok >> Okay
Lil >> Little
LMFAO >> Laughing My F**king Ass Off
LMK >> Let me know
Lol, Lolz >> Laugh Out Loud or Laughing Out Loud
LTNS >> Long time no see
M >> am
M2 >> Me too
M8 >> Mate
M9 >> Mine
MeMe >> An idea, style or action which spreads, often as mimicry, from person to person.
Msg >> Message
Mwa >> Mwah >> An air kiss
NE >> Any
NOOB >> Newbie >> Newb >> Nub >> Someone who is new toaparticular group, activity, game, field of study, etc.
Nope >> No
NP >> No problem
Nth >> Nthn >> Nothing
NVM >> Never mind
OF10 >> Often
OMG >> Oh My God
OP >> Original Poster
Oways >> Oh wow are you serious?
Outa >> Outta >> Out of
P/W >> PWD >> Password
PFA >> Please find attached
Pic >> Picture
Pls >> Plz >> Please
QT >> Cutie
QNA >> Question and answer
R&B >> Rhythm and Blues
RIP >> Rest In Peace
RSVP >> Re'pondez S'il Vous Plai^t,meaning Pls Reply
S2G >> Swear To God
Shawty >> Girlfriend or attractive female
SNAFU >> Situation normal, all f**ked up
SML >> So Much Love
SMS >> Short Message Service
SRSLY >> Seriously
Syns >> Sychronize
TB >> Text Back
TGIF >> Thank God It's Friday
TMI >> Too much information
TTYL >> Talk to you later
U/N >> Username
UR >> Your
USD >> United States Dollar
URL >> Uniform Resource Locator, also known as web address
VIP >> Very Important Person
Vry >> Very
Vzit >> Visit
WB >> Welcome Back
WBU >> What about you?
W/E >> Whatever
WTF >> What the f**k
WTH >> What the hell
WYM >> What you mean?
WYWH >> Wish you were here
X, XX >> Kisses
XD >> Extreme droll
XL >> Extra large
XO, XOXO >> Hugs and Kisses
Y >> Why?
( Y ) >> Thumbs up
(.Y.) >> Breasts
Yep >> Yes
YGM >> You get me?
YOLO >> You only live one
YW >> You're welcome
Zig. >> Cigarette
Zup >> What`s up?
Ye Naing at 5:04:00 PM 0
CPU Monitor Software လေးတင်ပေးလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ software တစ်ခုပါ မိမိကွန်ပျူတာမှာ CPU ဘာအမျိုးစားတပ်ထားလည်းဆိုတာစက်အဖုံးဖွင့်ပြီးဖြုတ်ကြည့်စရာမလိုတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးမိမိကွန်တာပျူဘာ windows တင်ထားလည်း User Name တွေပါဖော်ပြထားတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ Developer တစ်ယောက်ကြိုးစားပြီးရေးထားတဲ့ software ကိုအသုံးပြုပေးစေခြင်းပါတယ်။
Next Software မြန်မာ Key logger come soon .........
Credit to - ၀မ်းကိုကိုအောင်
Thiha Htike at 6:35:00 AM 0
မတင်တာလည်းကြာပြီနော် မအားလို့ပါ နောက်ပိုင်းအဆက်မပြတ် ကြိုးစားပြီးတင်ပေးသွားပါ့မယ်။ ။
ဆုံးရှူံးခဲ့ရတဲ့ ကြေကွဲခြင်းတွေက
ငါ့မျက်ဝန်းထဲ အိမ်မှာ ရစ်ဝဲလျက်ပါကွာ...
ကို.. ရက် လ နှစ်တွေ
ကဗျာချစ်စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးကိုလေးစားလျက်ပါ ကျွန်တော် "သီဟထိုက် " အမြဲကြိုးစားလျက်ပါ
Thiha Htike at 6:34:00 AM 0
ဒီနေရာမှာသွားရောက် Download လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မသိသေးတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ Xiaomi ရဲ့ Official Website မှာ Official Rom, Dev Rom တွေ အလွယ်တကူ download ဆွဲနိုင်ပါတယ်....
တင်ပုံ တင်နည်းကတော့ official firmware zip ဖိုင်ကို storage ထဲထည့်ပြီး updater ကနေ flash ယုံပါပဲ.....
Thiha Htike at 1:51:00 PM 0
Windows Phone သုံးစွဲသူများအတွက် အသံများကို Record ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည့် app တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ app သည် အစည်းအဝေးများ၊ အင်တာဗျူးများတွင် အသံများကို ကြည်လင်စွာဖြင့် ဖမ်းယူထားနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည့် app တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ app သည် ၁ နာရီခန့် ကြာမြင့်စွာ ဖမ်းထားသည့် အသံဖိုင်များကိုလည်း One Drive ပေါ်သို့ Upload ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ပေးထားသည်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများအနေဖြင့် Microsoft Store တွင် အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူများအတွက် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
Computer software Portable Recovery tools
Ontrack EasyRecovery ဆိုတာ ကွန်ပျူတာထဲက ဖျက်လိုက်တဲ့ဖိုင်တွေ၊ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဖိုင်တွေ၊ Format ချမိတဲ့ဖိုင်တွေကိုပါ ပြန်လည်ရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့ Recovery Software တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေကျ Word, Pagemaker, Excel စတဲ့ Document ဖိုင်တွေ၊ Mp3, Mp4, MPEG စတဲ့ Video ဖိုင်တွေ၊ Jpeg, TTF, PNG စတဲ့ Image ဖိုင်အမျိုးအစားတွေအားလုံးနီးပါးကို ပြန်လည် ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်.. Storage Device ရဲ့ Format တွေဖြစ်တဲ့ FAT12, FAT16, FAT32, NTFS နဲ့ NTFS5စနစ်ထိတောင် Support ပေးပါတယ်.. Lost Partition တွေကိုလည်း ပြန်လည်ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်.. အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး Portable အဖြစ်နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ကီးတောင်းတဲ့အခါ Key generator ကိုနှိပ်ပြီး Paste URL မှာ http://activations.lc-tech.com/activation/activate.php?vendorid=6&security=88425837&request=23727766&ticketcode=5070654940&lmver=v1.0.2.7-r8188:8194M ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ.. Activation Key အလိုအလျောက် ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်..
Ontrack EasyRecovery Enterprise v11.5.0.1 (32bit): 32.89 Mb
Ontrack EasyRecovery Enterprise v11.5.0.1 (64bit): 32.89 Mb
Thiha Htike at 8:18:00 PM 0
Thiha Htike at 8:14:00 PM 0
Flipagram ဆိုသည့် app သည် Windows Phone အသုံးပြုသူများအတွက် Social app တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ app သည် ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်အတိုများကို တင်၍ မိမိသူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများကို ဝေမျှနိုင်မည့် app တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ download ပြုလုပ်လိုသူများအနေဖြင့် Windows Store တွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး download ပြုလုပ်ရမည့် ဖိုင်အရွယ်အစားမှာ 15.71 MB ခန့် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
Windows Phone version 8 နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မည့် app တစ်ခု ဖြစ်သည်။ Download ရယူလိုသူများအတွက် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
Thiha Htike at 8:01:00 PM 0
CommuniCast 2015 နှင့် Myanmar International ICT Exhibition တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပမည်
CommuniCast 2015 နှင့် Myanmar International ICT Exhibition တို့ ပူးပေါင်း ကျင်းပမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ (၁၇) ရက်မှ (၁၉) ရက်နေ့အထိ Myanmar Event Park တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိုင် စီတီနယ်ပယ်အတွင်းမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တစ်နေရာတည်းတွင် ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။ “ဒီပွဲကနေပြီး အိုင်စီတီနယ်ပယ်ရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ ဆထက်မကဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည် ပါတယ်၊ အိုင်စီတီလုပ်ငန်းက နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်စီးပွားရေးအတွက် အရေးပါပြီး နယ်ပယ်အနှံ့မှာ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေတယ်” ဟုမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျုတာအသင်းချူပ်၏ ဥက္ကဌ ဦးခွန်ဦးကပြောသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားကို ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ပံ့ပိုး ကူညီမှုဖြင့် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
CommuniCast ၏ ပထမဆုံး အခမ်းအနားကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့သည်။ နိုင်ငံပေါင်း (၂၂) နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီပေါင်း (၉၀) ကျော်နှင့် အိုင်စီတီ ကျွမ်းကျင်သူပေါင်း (၂၀၈၆) ယောက် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ Myanmar International ICT Exhibition ကို မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျုတာအသင်းချူပ်မှ အဆက်ဆက် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ အဆိုပါ အခမ်းအနားနှစ်ခုကို တစ်ပေါင်းတည်း ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ဂြိုဟ်တု နည်းပညာနှင့် Broadband များမှ မိုဘိုင်းနှင့် Enterprise Solution များ အထိပြသသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Phone Application Root Tools ViVo
ViVo တွေ Root ဖောက်ခက်နေသူများအတွက် All ViVo insecure boot
Maung Pauk at 6:53:00 PM 3
တင်ပေးသူကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါ.. ကျွန်တော် ဒေါင်းထားတာ အတော်ကြာပါပြီ.. မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က မေးရင်း သတိရလာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ViVo Y-22, Y-15, Y-28 တွေ Root ဖောက်ဖို့အတော်ခက်ပါတယ်.. အခု ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ insecure boot ကို Fastboot ကနေ Flash ပြီး vRoot နောက်ဆုံးထွက် နဲ့ Root လို့ရပါတယ်.. ကျွန်တော် စမ်းသပ်ပြီးသားပါ..
insecure boot လုပ်ပြီး တင်ပေးထားတဲ့ မိတ်ဆွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
All ViVo insecure boot.zip: 13.9 Mb
Thiha Htike at 5:37:00 PM 0
ကျွန်တော်တို့ကဗျာဂျာနယ်လေးလဲ ကျွန်တော်အလုပ်တွေမအားတာနဲ့ ပုံမှန်မလည်ပတ်မိဘူးဗျာ အခုကစပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်မှာပါ ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပါတတ်သိတဲ့သူတွေ တော့ ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပြန်တင်မှာပါ အဲ့ဒါ ကဗျာအတွက်သီးသန့်ပါ အရင်က sms နဲ့ပို့ခိုင်းပါတယ် အခု Viber or ကျန်တဲ့ social network app တစ်ခုခုသုံးပြီးပို့နုင်အောင်စိစဉ်ပေးမှာပါ သင်တို့အတွက်လည်းဘေကုန်သက်သာတာပေါ့ ကောင်းပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာကဗျာပေါင်; 147 ပုဒ်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော့်ကိုထပ်မပို့သေးနဲ့ပါအုံး ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းက wifi earror ဖြစ်နေလို့ပြန်ပြင်ရင်ကြိမ်းသေ Factory reset ချမှာမို့ပါ အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဗျာတွေပါသွားမှာစိုးလို့ပါ အဲ့တော့ ဒီ 147 ထပ်ထပ်ပို့တဲ့ကဗျာတွေကို Cancel လုပ်ပလိုက်မှာပါ ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ မပို့သေးနဲ့ပါအုံးဗျ...နောက်ပြီးကဗျာအတွက် blog လေးတစ်ခုလုပ်ထားတယ် ပြင်ဆင်လို့မပြီးသေးဘူး ပြီးရင် ရေးသူတွေအားလုံးကို ကျွန်တော်တခါတည်း တင်ခိုင်းမှာပါ ဖုန်းကနေပေါ့ အဲ့တော့အမြဲ update လေးဖြစ်နေတာပေါ့... ဟုတ်ဘူးလား...
((ကဗျာရေးသူ=Juliar Eisan)) BEHS PHAKANY)
နောက်ဆုံးအပြီးသတ် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုရန် အွန်လိုင်း၌ ကမ့်ပိန်းပြုလုပ်
Thiha Htike at 4:20:00 PM 0
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၏ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကို စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်မှ ၂၇ ရက်အထိ ကြေညာမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုကြရန်အတွက် အွန်လိုင်း hashtag ကမ့်ပိန်းတစ်ခုပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု သိရသည်။
မည်သည့် ဘာသာစကားဖြင့်မဆို ရေးသားထားသည့် “မဲစာရင်းသွားကြည့်စို့” ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် စာတန်းကို ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မိမိဓာတ်ပုံ (သို့မဟုတ်) မဲစာရင်း သွားရောက် စစ်ဆေးနေသည့် မိမိဓာတ်ပုံကို Facebook တွင် Public အနေဖြင့် တင်ပေးသည့် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါအစီအစဉ်အတွက် Facebook စာမျက်နှာ၌ စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံနှင့်အတူ စာသားများရေးသားရာတွင် မဲစာရင်းကို စစ်ဆေးသင့်သည့် အကြောင်းအရာများ ၊ မဲစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၏ အရေးပါမှု အခြေအနေများကို ပူးတွဲ တင်ဆက်နိုင်ကြောင်းနှင့် မိမိ ကိုယ်တိုင်သည်လည်း မဲပေးရမှု မဆုံးရှုံးစေရန်အတွက် သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်သည်ဟု ကမ့်ပိန်းလှုံ့ဆော်သူများက ဆိုသည်။